Xog: Qodob xasaasi ah oo la doonayo in isbeddel loogu sameeyo shirka Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Xog: Qodob xasaasi ah oo la doonayo in isbeddel loogu sameeyo shirka...
Xog: Qodob xasaasi ah oo la doonayo in isbeddel loogu sameeyo shirka Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online) – Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay oo ku dhow shirka ka socda Muqdisho ayaa Caasimada Online u sheegay inuu socdo isku day lagu yareynayo tirada ergooyinka soo dooranaya xildhibaanada goolaha shacabka.
Sida aan xogta ku helnay, qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa doonaya in ergooyinka lagu soo koobo 51, halka ay hadda ka yihiin 101, sida ku qoran heshiiskii laga gaaray doorashada ee la saxiixay 27-kii May.
“Madax goboleedyada qaar ayaa ku doodaya in maaliyad ahaan, iyo farsamo ahaan intaba ay ku adag tahay in halkii xildhibaanba ay soo doortaan 101 ergo, taasi oo ka dhigan kumanaan ergo,” ayuu yiri ilo-wareedka la hadlay Caasimada Online.
Qodobkan ayaa u muuqda mid ay inta badan ka mideysan yihiin madaxda maamul goboleedyada, marka loo eego qodobadii kale ee shirka la horkeenay oo mid ka mid ah durbaba la diiday, kaasi oo la xiriiray deegaan doorashada.
Ra’iisul Wasaraaha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa diiday isku day ay Axmed Madoobe iyo Cali Guudlaawe ku doonayeen in wax looga beddelo deegaan doorashooyinka lagu heshiiyey in doorashada ay ka dhacdo, oo ah laba magaalo halkii maamul goboleedba, iyo magaalada Muqdisho oo ay ka dhaceyso doorashada xildhibaanada Waqooyi iyo Banaadiriga.